This article may require cleanup to meet Wikipedia's quality standards. Please if you can. The talk page may contain suggestions. (မေ ၂၀၁၇)
အနောက်နိုင်ငံများတွင် အလွန်ခေတ်စားသော အခြားလှေပြိုင်ပွဲ တစ်မျိုးမှာ ရွက်လှေပြိုင်ပွဲဖြစ်၏၊ ပြိုင်ရွက်လှေများမှာ ရိုးရိုးရွက်လှေများ ကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ အလွန်သေးသွယ်သော ပုံသဏ္ဌာန်များရှိကြ၍ ရွက်များမှာ လည်း ပြိုင်လှေမျိုးကိုလိုက်ပြီးလျှင် အရေအတွက်အားဖြင့် အနည်းအများရှိ ကြသည်။ လှေ၏အရွယ်မှာမူ ၁၅ ပေမှ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်လောက်အောင် ကြီးမားသော ပြိုင်ရွက်လှေကြီးများအထိ အရွယ်အမျိုးမျိုး ရှိပေသည်။
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာပင် ရွက်လှေအသင်းများ မြောက်မြားစွာရှိ၍ နှစ်စဉ်လည်း ရာသီအလိုက် ပြိုင်ပွဲများ ကျင်းပလျက်ရှိ၏။ သို့ရာတွင် ပြိုင်ရွက်လှေစီးသူတို့သည် လှေနှင့်ရေအကြောင်းကို နားလည်ရုံနှင့်မပြီးချေ။ လေအကြောင်းနှင့် ရွက်အကြောင်းကိုလည်း ကောင်းစွာနားလည်၍ ရွက်လှေ ကို လေစုန်လေဆန်မရွေး အလွန်ကျွမ်းကျင်စွာ ကစားတတ်ရန်လိုပေသည်။မော်တော်ဗုတ်ဆိုသည်မှာ မော်တော်အင်ဂျင်စက်ဖြင့် မောင်းနှင်ရ သော လှေမျိုးကိုခေါ်သည်။ မြန်မာမင်းများလက်ထက်က ဓာတ်လှေတော်ဟု ခေါ်၏။ မော်တော်ဗုတ်များကို မြစ်ချောင်းများတွင် အသုံးပြုရန် အလွန်သင့် တော်သည်။ ရာသီဥတုမရွေးဘဲ လွယ်လင့်တကူ မောင်းနှင်စီးနင်းနိုင်သည့် အတွက်လည်း ယခုအခါ မော်တော်ဗုတ်များကို အမြောက်အမြား အသုံးပြု လျက်ရှိကြသည်။ မော်တော်ဗုတ်အကြီးစားများတွင် အင်ဂျင်စက်ကို ဝမ်း လယ်တွင် ထိုင်လေ့ရှိ၍ ထိုလှေမျိုးသည် သာမန်သင်္ဘောများကဲ့သို့ ရေထဲ၌ ဦးစိုက်နေတတ်သည်။ အပျော်စီးမော်တော်ဗုတ် အငယ်စားများတွင်မူ ပဲ့ချိတ် စက်ကို ပဲ့ပိုင်း၌တပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ရှိကြ၏။ ထိုအခါ စက်အလေးကြောင့် လှေသည် ဦးမော့မော့ဖြစ်နေတတ်၍ အသွားလည်းမြန်လေသည်။ပဲ့ချိတ်စက်များသည် ပေါ့ပါး၍ ရေတိမ်တွင် သုံးနိုင်ခြင်းကြောင့် အလွန်ခေတ်စားလာခဲ့သည်။ ယခင်က ပဲ့ချိတ်စက်တစ်ခုသည် ပေါင် ၄ဝ ခန့်မျှသာ လေး၍ မြင်းအားတစ်ကောင်ခွဲမှ နှစ်ကောင်အထိသာရှိသည်။ ၁၉၃၅ ခုနှစ်၌ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် ပဲ့ချိတ်စက်တစ်မျိုးမှာ ပေါင် ၁၅ဝ ခန့် လေးပြီးလျှင် မြင်းကောင်ရေအား ၆ဝ မျှရှိလေသည်။ သို့သော် စက်အလေး ကြောင့်တစ်ကြောင်း၊ ပန်ကာလည်ရှိန်ကြောင့်တစ်ကြောင်း လှေ၏ပဲ့ပိုင်းကို နစ်စေတတ်သဖြင့် ဤစက်မျိုးကို လှေကြီးများ၌ တပ်ဆင်အသုံးပြုလေ့ မရှိ ကြပေ။
နောက်ဆုံးပေါ် အပျော်စီးလှေတစ်မျိုးမှာ ခေါက်လှေဟုတွင်သော လှေမျိုးဖြစ်၏။ ထိုလှေမှာ အလွန်ပေါ့ပါးစွာ ဆောက်လုပ်ထား၍ အသုံး မလိုသည့်အခါ လှေကို ခေါက်ပြီးသိမ်းဆည်းထားနိုင်လေသည်။ရွှေဘုံ နိဒါန်းတွင် လှေစုအခန်း၌ လှေအမျိုးမျိုးအကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည်။ သထုံမင်းတို့လက်ထက် သထုံပြည် တောအရပ်၌ သစ်ပင်ကြီး တစ်ပင်သည် (ထိုသစ်ပင်ကို ပိန္နဲမပင်ဟု ဆိုကြသည်။) လုံးပတ်ညီ ညွတ်သည်။ ခက်မလေးဖြာရှိသည့်အကြောင်းကို ကြည့်ရှုစေသည်တွင် တစ် ကိုင်း၌ သာလိကာနား၍ အသံသာယာစွာ ကြွေးကြော်သည်။ တစ်ကိုင်း၌ ရှူးပျံနားလျက်ရှိသည်။ တစ်ကိုင်း၌ ကင်းကြီးကန့်လန့်ရှိသည်။ တစ်ကိုင်း၌ သစ်ကြောအဆင့်ဆင့်ရှိသည်။ ထိုလေးကိုင်း လေးခက်တို့ကို လှေလေးစင်း လုပ်သည်။
ဗြင်းနတ်ဘုရားတည်ရာ တောင် (ဇင်းကျိုက်တောင်)သည် ဘီလူး တို့နေရာဟောင်းတောင်ဖြစ်၍ ဘီလူးတို့ အဿမုခီကို ကြောက်ရွံ့သည်ကို အစွဲပြု၍ ပွဲသဘင်ခံမည်။ ပွန်စလိုင်ရကို သုံးဆောင်မည်ကူးသွားသည်ကာလအဿမုခီရုပ်လုပ်သည့်လှေကို မင်းတို့စီးနင်းသည်ဆိုသည်။ ထိုလှေသည် ဦးကာအဿမုခီရုပ်၊ ပဲ့ကား မင်းစီးလေဖြစ်သောကြောင့် လှော်ကားပဲ့ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်သည် ယူရန်ရှိသည်။